kapilahenjana [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/e/e3c4bcb67760a7adf55b47acc0e931f0.xhtml failed
Ny kapila henjana ("disque dur" na "hard disk")
Mitahiry no asan’ny kapila henjana, izy no mitahiry ireo karazana donnees rehetra voalamina ho fichiers anaty dossiers sy sous-dossiers, na ireo mirakitra ny OS na ireo kirakira na ireo fichiers an’ny mpampiasa.
Kapila magnetika maromaro, misy tendro mamaky azy, voafono anaty boaty kely tsara hidy izy, ary misy precision lehibe ny mekanika ao anatiny. Noho izany:
Manimba azy ny akaiky zavatra misy andriamby, ohatra ny transfo na baffles
Tsy mahazo mikontsana, ary tsy mahazo mianjera.
Ny hadirin’ny kapila henjana dia ny habetsaky ny octets na bytes zakany. Amin’izao fotoana izao dia Go (giga-octets) no andrefasana azy.
Ny fitohizany amin’ny reni-karatra:
IDE na Parallel-ATA (P-ATA): io no ampiasain’ny kapila henjana mahazatra. Ahazoana tosaka (debit) 100 - 133 Mo/s izy. Ny ahafantarana azy dia ilay fitohizana IDE misy broches 40 ao aoriany.
Serial ATA (S-ATA): teknolojia vaovao izy io, ahazoana tosaka 150 Mo/s ankehitriny ary kasaina ho tonga any amin’ny 300 - 600 Mo/s. Tsy misy afa-tsy broches 7 ny fitohizany.
SCSI : izy ity dia teknolojia efa misy saingy lafo vidy. Mila karatra SCSI manokana ny fampiasana azy. Ahazoana hatrany amin’ny 640 Mo/s ny tosaka arakaraka ny config.
ireo kapila henjana finday, izay apetraka ivelan’ny solosaina, fa mitohy amin’ny USB na Firewire. Matetika izy ireny dia mitovy amin’iretsy kapila teo aloha ihany saingy nampiana adaptateur PATA na SATA / USB na Firewire fotsiny.
Ny hafaingan’ny fihodiny no mampiseho ny fahafainganany mamaky izao voasoratra eny ambonin’ny kapila. 5400 sy 7200 hodina isa-minitra (him) ny an’ireo kapila P-ATA sy S-ATA, fa tonga hatrany amin’ny 10000 - 15000 him any ny an’ireo kapila SCSI.
Ny memoire cache dia memoire kely hametrahana donnees vonjimaika. Tsy dia miasa izy io raha tsy efa misy embouteillage ny fitaterana ireo donnees. Tsara ihany anefa isy lehibe ho an’ireo kapila makadiry.
kapilahenjana.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43